Israel oo duqeysay baabuur gantaalo siday - BBC Somali - Warar
Israel oo duqeysay baabuur gantaalo siday
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Janaayo, 2013, 18:38 GMT 21:38 SGA
Mid ka mid ah dayaaradaha dagaalka ee Israel
Saraakiil Maraykan ah ayaa BBC-da u xaqiijiyay in dayuuradaha dagaalka ee Israel ay duqeeyeen baabuur kolonyo ah oo sidday gantaalaha Ruushku sameeyo ee dhulka ilaa cirka wax ka dila maalintii Arbacada.
Baabuurta kolonyada ah waxaa loo maleynayaa inay u socdeen kooxda Ismaaliga ah ee dalka Lubnaan ee Xisbullah, arrintaas oo Israel ay ku celclin jirtay inaysan u dulqaadan doonin.
Sarakaalka Maraykanka ah waxaa uu sheegay in gantaalaha la duqeeyay uu noocoodu yahay SA-17s, oo ah kuwa ridada dhexe ee habka dhulka ilaa cirka loo adeegsado.
Suuriya waxay cabasho rasmi ah oo duqeyntan ku saabsan u gudbisay Qaramada Midoobay, iyadoo sheegtay in la garaacay xarun cilmi-baaris milateri oo ku taal agagaarka magaalada Dimishiq.
Laakiin weriye BBC oo jooga Washington waxaa uu leeyahay werwer la'aanta Maraykanka ka muuqata waxaa laga yaabaa in hore loola socodsiiyay in weerarka la qaadayo.
Ruushka iyo Iran ayaa walaac ka muujiyay weerarka Israel qaadday, taas oo Moscow ay ku tilmaantay dagaalka Suuriya oo si khatar ah sare ugu sii kacay.Isra'el waxa hadal rasmi ah lagama hayo.